HUMNA BARREESSUU KEESSA JIRUUN GALAANA GUDDAA SOCHOOSUU DANDEENYA!! – Welcome to bilisummaa
BEEKAN: Egaa kana kanaf fala kan barbaaduu qabu uummata Oromoo mara. Afaan tokko duubaan kan dhaabatu hawaasa afaan sana dubbatudha. Har’a afaan Oromoo sadarkaa 1ffaa tii hanga dhaabbilee barnoota olaanaa biyyaalessaa keessatti barsiifamaa fi qoratamaa jira. Haa ta’u malee, afaan Oromoo sadarkaa abdi qabeessa irra yeroo ga’etti og-barruun isaa Ongee hamaatiin rakkachuun isaa nama rifachiisa. Kanarraa wanti hubatamu, afaan Oromoo yeroo ammaa kanas hamma ta’e guddatee haa jiraatuyyu malee gama guddina og-barruu afaanichaan yoo ilaalame ammas rakkooleen hedduu akka jiran nu hubachiisa. Hayyoonni ammas itti fufuun barreessuudha qabu; abbaan qabeenyaafi mootummaan ammoo cina isaanii dhaabatee haamileefi maallaqaan tumsuun barbaachisaadha. Warreen doorsisaafi sodaachisa garaagaraa namarratti dhiyyeessan ammoo danda’amnaan seeratti dhiyeessuudha. Seerriifi heerri biyya kanaa afaan saba kamiifuu mirga walqixxee laateera. Kana ilaalchisee heerri mootummaa biyya Itoophiyaa keewwaata 5 lakk 1 qooqni Itoophiyaa kamiyyuu mootummaa biratti beekamtii walqixxee qabaatu “All Ethiopian Languages shall enjoy Equal state recoginition” jedha. Dabalataanis Heerri Mootummaa Riippaabliika
Dimookiraatawaa Itoophiyaa keewwata 39 lakkoofsa 2 irratti akka ibsametti, Sabni, Sablammiin, uummanni Itoophiyaa kamiyyuu mirga qooqa isaatiin dubbachuu, barreessuu, qooqa isaa guddisuufi aadaa isaa ibsuu, babal’isuu akkasumas seenaasaa kunuunsuu qaba jedha waan ta’eef mirga heerri kun nuuf laateen diina afaan keenyaafi seenaa keenya akk hinkunuunfanne taasisu dura ciminaan dhaabbachuuti qabna. Dhimma rakkoo gama wiirtuu qorannoofi qo’annoo afaanii ilaalchisee ammoo humnasaa kan qabu mootummaadha. Kanarratti mootummaa naannoo Oromiyaa ijaarsa amma jalqabeefi waajjiroolee dhimma afaaniif seenaa Oromoo ilaallaturratti ogeeyyii hojicha gitan ramaduufi xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechuuti qaba. Barreessitoota ka’aa jiran kanallee sadarkaa biyyoolessaatti ijaaree jajjabeessuufi waajjiraalee meeshaalee barreessuuf gargaaraniin cinaa dhaabbachuu qaban jedha ani. Kanarraa kan hafe ammoo Oromoon abbaan afaaniifi seenaa falmachuudha qaba.
Egaa seenaan hiyyeesa hinqabuuti, yoo kan bara Tafarii dugduuba deebi’ee kaasuun barbaachises; Obbo Hayile Sillaaseen mooticha impaayera Itoophiyaa bara 1930-1974’biyya kana bulchaa turedha. Mootichi kun akkuma mootota impaayera biyyattii kanneen biroo aangoon waaqa biraa samii gadiitti daangaa malee akka isaaf kennametti kan amanu ture. Ilaalchi isaa kun immoo uummattota impaayeratti jalatti bulaniif quufa mormaa tahee ture. Keessattuu caasaan bulchiinsa isaa kan uummata Oromoo isa walakkaa impaayerattii tahuuf qabu itti fufiinsa aangoo isaaf gufuu itti tahee, dhumti isaa akka itti gabbaabbatu taatee sanuu kursii (teessoo) isa baataa turte waliin dabaree akka wal baataa hafan isa taasifte. Keessumattuu mootin kun uummata Oromoo kana akkuma uummata impaayerattii keessa jiraatan kanneen biroo salphaatti garboomsuun waan hin dandaa’mne ta’usaa erga hubatee booda tooftaalee ittiin uummaticha gita bittaasaa har’aafi garbummaa hidda isaatii jalatti barabaraan hambisu dursee baafatee ture. Kaayyoo isaa kana galmaan ga’achuudhaaf xiyyeeffannoon isaa inni duraa ogbaruu sabichaa balleessuufi ukkaamsuun saba hambaafi duudhaa, seenaa mataasaa hin qabne taasisuu ture. Ogbarruu Oromoo kana hundeen akka barbadooftu gochuufis mala gurguddaa sadii ol gargaarameera. Inni jalqabaa yeroo wareerraa Xaaliyaanii keessatti gaafa sabni Oromoo afaansaan dalagaalee hunda gargaaramuutti ka’u, labsii Afaan Oromoo eessattu akka hin dubbatamneefi afaanicha dubbachuun immoo seera mootichaa duratti yakkamaa kan nama taasisu dambii tumsiise.
Kun immoo manneen amantaa kam keessattiyuu afaanichi akka hin dubbatmneefi ambaan afoola sabichaa olkaa’amee akka dhaloota itti aanuuf hindarbine taasise. Qabxiin inni lammataa, mo’atamuu warra adii (1941)’n booda Sirni daldala garbaa impaayerattii keesaa dhaabatus, mootichi garuu bifaafi haalaa adeemsa gochichaa jijjiiruun uummata impaayeratti keessa jiru keessaa addaan qoodee gara uummata Oromoo irratti sirna gabrummaa haaraa diriirsuun Oromoofi Oromoo walnyaachise. Inni sadaffaan ammoo caasaa siyaasaa isaa kan Kiristaanummaa, Amaarummaaniifi Oromummaa doomsuu giddugaleessa godhate irratti hundaa’uun mootummaa giddugaleessa tokko hundeesse. Kunis duudhaa, safuu, aadaafi amantaa uummata Oromoo hudhuufi daran balleessuuf shira xaxamaa turedha. Dhimmi guddaa nama gaddisiisu ammoo uummatni Oromoo sirna bittaa kana jalatti kan mulqame mirga Afaan isaan barachuu qofa osoo hin taane, mirga Afaanuma kamiiniyyuu barachuu dhabuu isaati. Kunis uummaticha doofummaa keessatti hambisuun qabeenya namaafi uumamaa isaa bifa salphaan saamuufi garboomsuuf immoo haal duree tahuu danda’a jedhamee kan raawwatamedha. Dhukkubi sammuusaa inni guddaanis baay’ina uumma guddaa kanaati.
Afaan Oromoo afaan uummata miliyoonota hedduun dubbatamu ta’ee osoo jiruu hacuuccaa fi cunqursaa waggoota danuu oliif humna koloneeffattootaan irra gaheen, akka ittiin hin baratamneefi hin hojjetamne godhamee akka baduufi afaan amaaraan akka liqimfamu gochuuf warra yaalamaa ture keessaa isa tokkodha. Haata’u malee qabsoo uummati Oromoofi ilmaan cunqurfamoo kan biroo waliin godhaniifi injifannoo bara 1991 argameen afaan Oromoo, Oromiyaa keessatti afaan barumsaafi hojii akka ta’uuf carraa yookaan hiree argate. Haala kanaan bara 1991 yeroo ABOn handhuura Oromiyaa Finfinnee seene irraa kaasee Qubee Afaan Oromoo barachuufi barsiisuun duula guddaatu godhame.
Kitaabonni barumsaa kumaafi kitilaan maxxanfamee manneetii barumsaaf raabsaman. Barruuleefi galaalchonni hedduun bahuu jalqaban. Barruulee yeroo sana dhalataniifi maxxanfamuun uummata bira gahaa turan keessaa, kanneen akka Qabee, Madda Walaabuu, Gadaa, Ichimaafi Biiftuun kan yaadataman yoo ta’an, galaalchota yeroo sana turan keessaa ammoo kan akka Bakkalcha Oromiyaa, Madda Walaabuu, Urjii, Coqorsa, Seyfe nebelbaal, Risaafi Irreecha kan jedhaman ni yaadatamu. Haa ta’u malee barruuleen kunneen akka jalqabanitti itti fufanii guddachuufi babl’achuu hin dandeenye. Hidhaafi dararama namoota waan kana hojjetan irraan gaheen qopheessitoonni galaalchotaafi barruulee kanaa hojii isaanii itti fufuu hindandeenye. Artistoonni yeroo sana kessa mul’atanillee gariin ni ajjeefamani kaan ammoo biyyaa baafaman. Naasisuufi sodaachisuu akkasiirraan kan ka’e gidduutti waa’ee barruu Oromoo kan iddoodhaa kaasu dhibee barruu Oromoof bara dukkanaatu ture. Yeroo ammaa kanammoo keessumattuu waggaa lamaa aaitti waan abdii namatti horu hedduun mul’achuu eegalaniiru. Kitaabonni dhibbaan lakaa’amanis amma gabaarra jiru. Barruuleen kanneen akka SAUU, SIIFSIIN, GADAA, ARSADIIFI kan biroonillee yeroo ammaa kana hawaasa keessa jiru. Dhiibbaan amma jiru akka yeroo darbee sana ta’uu baatus, ammas waan kan Oromoo ta’e kanarratti dhiibbaan taasifamaati jira. Kunoo ijoolleen barruu Oromoo gurguraa jiran reebamanii kaan hidhaa kaan ammoo doorsifamaati jiru. Haata’u malee kana booda waa’ee dhimma afaan Oromoo ukkaamsuurratti qaamni hojjetu Oromoo milyoonota 50 olitti tilmaamamu kana tuffachuu waan ta’uuf irraa of qusachuu qaba. Kana booda galaana guddaa kana dura goruun ittiin dhidhima buufamuuf yoo ta’e malee, haala kamiinuu luugama garbummaa jalatti deebisuun akka hinyaadamne diinni Afaan kanaa beekuutu irra jiraata.
BEEKAN: Ani amma barataa waggaa lammaffaati. Carraa barnootaa argadhetti gammadeera. Afaan Oromoo sadarkaa dooktorummaatti banamuu dhabuusaaf gadda guddaa qabaadhus, Afaanuma Ingiliziitiin dhimma Afaaniif aadaa Oromooratti qorachuu eegaleera. Mata dureen qorannookootiis ‘DOCUMENTATION AND SEMANTIC ANALYSIS OF OROMO ORAL POETRY’ kan jedhudha. Mata duree kanaan waa’ee sabakootii argannoo guddaa tokko bira akkan ga’u nanbeeka. Waan Oromoon dubbatama afaaniin keessasaa ibsachaa tureefi jiru keessaan hiika dhokatoo barbaaduudha xiyyeeffannaankoo. Kanaafuu waggaa dheeraa nafudhatus gargaarsa Waaqayyoon galma nan gaha. Waa’ee maqaa dooktorummaa argachuuf utuu hintaane, waan dhokatee jiru ifa gochuu danda’uutu nama boonsa. Baay’een namaa waraqaa dooktorummaa harkaa qabaatus mataasaaf malee, sabasaaf utuu hinjiraatiin du’eera; kan jirusillee jira.
Tags Beekan Gulummaa
Previous Dur Kilaashii baadheen diinatti qaxxisa, amma CILEE gubeen ilmakoo guddisa..
Next Dhibeen EBOLA Itiyoopiaa hin seenne ta’us of Eeggataa jirra jedhu angawoonni